Uninzi lwethu luyasazi isixhobo sikaGoogle seMhlaba, yiyo loo nto kule minyaka idlulileyo siye sabona ubungqina bayo obunomdla, ukusinika izisombululo ezisebenzayo ngokuhambelana nenkqubela phambili yetekhnoloji. Esi sixhobo siqhele ukusetyenziselwa ukufumana iindawo, ukufumana amanqaku, ukukhupha ulungelelwaniso, faka idatha yendawo ukwenza uhlobo oluthile lwe ...
Inyathelo 1. Khuphela itemplate yokondla idatha. Nangona inqaku ligxile kulungelelwaniso lwe-UTM, usetyenziso luneetemplate kubude nakubude ngeedigri zedesimali, nakwiidigri, imizuzu kunye nemizuzwana. Inyathelo 2. Faka itemplate. Xa ukhetha itemplate kunye nedatha, ...
Fumana indlela ehamba ngayo kwiGoogle Earth
Xa sizobe indlela kuGoogle Earth, kunokwenzeka ukuba ukuphakama kwayo kubonakale kwisicelo. Kodwa xa sikhuphela ifayile, izisa kuphela ulungelelwaniso lobude kunye nobude. Ukuphakama kuhlala kungunothi. Kule nqaku siza kubona indlela yokongeza kule fayile ukuphakama okufunyenwe kwimodeli yedijithali (srtm) esetyenziswa nguGoogle Earth. Zoba umzila ...
Kwabaninzi babahlalutyi, abafuna ukwakha iimephu apho ireferensi ye-raster evela kulo naliphi na iqonga elinjengoGoogle, iBing okanye umfanekiso weArcGIS uboniswa, siqinisekile ukuba asinangxaki kuba phantse naliphi na iqonga linokufikelela kwezi nkonzo. Kodwa ukuba into esiyifunayo kukukhuphela loo mifanekiso kwisisombululo esifanelekileyo, ke zeziphi izisombululo ezinje ...
Okufumaneka, Google umhlaba / imephu, Ehlabathini elungileyo
I-BBBike sisicelo esona njongo yayo iphambili kukubonelela ngesicwangciso sendlela yokuhamba, ngebhayisekile, ukutyhutyha isixeko kunye nemimandla esijikelezileyo. Senza njani isicwangciso sendlela yethu? Ewe singena kwiwebhusayithi yakho, into yokuqala ebonakalayo luluhlu olunamagama ezixeko ezahlukeneyo, phakathi kwe ...
Umhlaba ka-Google GPS KML
Ndihlala ndibona imibuzo efanayo kumagama aphambili abasebenzisi abeza kwiGeofumadas bevela kwinjini yokukhangela kuGoogle. Ndingayenza i-cadastre ndisebenzisa uGoogle Earth? Ichane kangakanani imifanekiso kaGoogle Earth? Kutheni uphando lwam lususwe kuGoogle Earth? Ngaphambi kokuba bohlwaywe ngento ...
cadastre Umhlaba ka-Google KML PlexEarth
AutoCAD-AutoDesk, cadastre, Google umhlaba / imephu
Jonga uGoogle Earth uququzelela kwi-Excel-kwaye uwaguqulele kwi-UTM
Ndinedatha kuGoogle Earth, kwaye ndifuna ukubona uququzelelo kwi-Excel. Njengoko ubona, ngumhlaba onee-vertices ezisixhenxe kunye nendlu enee-vertices ezine. Gcina idatha kaGoogle yoMhlaba. Ukukhuphela le datha, cofa ekunene ku "Indawo zam", kwaye ukhethe "Gcina indawo njenge ..." Kuba yifayile ...
iifayile shp Vula nge Google Earth
Inguqulelo yeGoogle Earth Pro iyekile ukubhatalwa kudala, apho kunokwenzeka khona ukuba uvule iifayile ezahlukeneyo ze-GIS kunye neRaster ngqo kwisicelo. Siyaqonda ukuba kukho iindlela ezahlukeneyo zokuthumela ifayile ye-SHP kwiGoogle Earth, nokuba yeyiphi na isoftware enjengeBentleyMap okanye i-AutoCAD Civil3D, okanye umthombo ovulekileyo ...
Umhlaba ka-Google KML QGIS
Manager Spatial: Lawula iinkcukacha ezingomhlaba nangokugqibeleleyo, nokuba ukusuka AutoCAD
Umanejala womhlaba sisicelo solawulo lwendawo, esebenza ngokuzimeleyo. Ikwanayo iplagi enika amandla e-geospatial kwi-AutoCAD.
AutoCAD 2015 I-AutoCAD Imephu Dgn Dwg KML umbono yam yokuqala QGIS shp
I-CartoDB yenye yezona zicelo zinomdla kakhulu ezenzelwe ukudala iimephu ezimibalabala kwi-intanethi ngexesha elifutshane kakhulu. Ukuxhonywa kwiPostGIS kunye nePostgreSQL, ekulungeleyo ukuyisebenzisa, yenye yezona zinto zibalaseleyo endizibonileyo ... Iifomathi ezixhasayo kuba luphuhliso olujolise ...
Geospatial - GIS, ezintsha, Internet kunye neBlogs
Ukunyanzelisa, ukuchithwa kwexabiso eliphantsi kwe-GPS sentimitha
Le mveliso isandula ukwenziwa kwiNkomfa yaBasebenzisi ye-ESRI eSpain, kwiveki ephelileyo kwaye oku kulandelayo baya kuba kwiTopCart eMadrid. Yinkqubo yokuma kwe-GPS kunye nenkqubo yokulinganisa exhasa ukwenziwa emva kwenkqubo, ekunokufunyanwa kuyo ukuchaneka kwesentimitha. Akukho nto abanye abayenziyo ...
GPS / Izixhobo, Topography
Le projekthi inomdla ngoku ephuhliswayo eHonduras, phantsi kwendlela yeRipid Transit Bus (BTR). Nangona ngoku ikweli nqanaba lokuqonda kunye nabathwali abangenayo ingcaciso yendlela iidolophu eziguqukayo ngayo, kubonakala ngathi lelinye lawona manyathelo asebenzayo kuphuhliso lwe-axis axis ...
Uyifaka njani imifanekiso yasekhaya kuGoogle Earth
Ukuphendula eminye imibuzo eza kum, ndithatha ithuba lokushiya iziphumo zisetyenziselwe uluntu. Ngexesha elidlulileyo bendikhe ndathetha ngendlela onokufaka ngayo imifanekiso edityaniswe nenqaku kuGoogle Earth, nangona usebenzisa iidilesi zewebhu. Kule meko ndifuna ukuyibonisa ndisebenzisa indlela yengingqi: Ndicinga ukuba ifayile ikwindawo C: /Users/Usuario/Downloads/woopra_ios.png, emva koko ...
Page 1 Page 2 Page 3 ... Page 6 kwiphepha elilandelayo